Vamwe Vaparidzi Vari Kudiwa | Bhuku Regore ra2015
Mashoko Akanaka Anosvika Kumaruwa
Nokufamba kwenguva, pane mamwe mamishinari akazosvika achibva kune dzimwe nyika. Somuenzaniso vamwe vakauya ndiPete Paschal, Amos naBarbara Parker, uye Richard naBelva Stoddard avo vainge vamboshanda kuBolivia, uye Jesse naLynn Cantwell vakabva kuColombia. Mamishinari acho akabatsira kuti basa rekuparidza ritowedzera kufambira mberi. Pakazosvika 1973 vakawanda vainge vava kudzidzisa vanhu Bhaibheri mumataundi uye mumaguta emuDominican Republic, asi mashoko akanaka ainge asati asvika kuvanhu vekumaruwa. Nokudaro, pakarongwa kuti vanhu vaigara kumaruwa vaparidzirwe. Hama padzakakumbirwa kuti dziite mwedzi miviri dzichiparidza kumaruwa, mapiyona enguva dzose 19 akazvipira kuita basa racho. Kubva muna December 1973 kusvika muna January 1977, mapoka emapiyona aitumirwa kunzvimbo dzaiva nevaparidzi vashoma kana kuti dzaisatombova nevaparidzi.
“Taichinjanisa mabhuku nehuku, mazai kana kuti michero”
Mumwe piyona akaendawo kunoparidza kumaruwa akati: “Pashure pekuita zuva rese tichiudza vanhu mashoko eBhaibheri nekuvasiyira zvinyorwa, zuva raitevera racho taizodzokera kune vaya vainge varatidza kufarira. Sezvo vanhu vekumaruwa vaiva nemari shoma, taichinjanisa mabhuku nehuku, mazai kana kuti michero. Jehovha akaita kuti tisambofa nenzara.” Vakawanda vakaverengerwa Bhaibheri kekutanga muupenyu hwavo. Vamwe vainge vaudzwa nevafundisi kuti Jehovha ndiye Dhiyabhorosi. Vakashamiswa zvikuru pavakaverenga mavhesi eBhaibheri akadai saPisarema 83:18, inoti: “Imi, mune zita rokuti Jehovha, Imi moga ndimi Wokumusorosoro kumusoro kwenyika yose”! Mune dzimwe nzvimbo maiva nevanhu vakawanda vaifarira zvekuti pairongwa misangano yekuti vapinde.
Mamwe Mamishinari Uye Bazi Idzva
Muna September 1979, Abigail Pérez nemudzimai wake, Georgina, vakasvika vari mamishinari. Vakapiwa basa remudunhu. Pave paya, muna 1987, Tom naShirley Dean avo vakanga vapinda chikoro cheGiriyedhi vakauya kuzotsigira basa rekuparidza. Vashumiri venguva yakazara vainge vabva kuPuerto Rico vakabatsira zvikuru pakushanda ndima yacho. Muna August 1988, Reiner naJeanne Thompson vakatumirwa kuDominican Republic. Iyi yaiva nyika yechishanu yavakatumirwa kwairi semamishinari.
Pakazosvika 1989, avhareji yevaparidzi yainge yawedzera kusvika ku11 081, uye zvaiva pachena kuti nhamba yacho yaizowedzera, nekuti paiitiswa zvidzidzo zveBhaibheri 20 494. Kuwedzera uku kwakaita kuti zvimwe zvinhu zviome. Semuenzaniso, chivako chebazi chaivapo chainge chabatsira zvikuru, asi pakunopera kwemakore ekuma1980, chainge chisisakwane. Reiner Thompson anoti: “Vashandi vepabazi vainge vawandisa zvekuti painge pava kufanira kutsvagwa zvimwe zvivako muguta racho zvekuti vagare uye kuti vachengetere zvinhu.”
Reiner anoenderera mberi achiti: “Zvainge zvakaoma kuwana nzvimbo inonyatsoita kuvakira bazi idzva. Mumwe muzvinabhizimisi akanzwa kuti taitsvaga nzvimbo yekuvakira akabva ataura nesu. Akatiudza kuti aiva nenzvimbo yakanaka yaaida kutengesera Zvapupu zvaJehovha chete. Aimbova nebhizimisi hombe rekusona uye mabharani wake nevamwe vashandi vake vaiva Zvapupu zvaJehovha. Kwemakore ainge aona kuti vanhu vacho vakatendeseka zvikuru uye vane ruremekedzo uye izvi zvakamufadza chaizvo. Nemhaka yekuti airemekedza kwazvo Zvapupu zvaJehovha, akati aida kuvatengesera nzvimbo yacho nemutengo wakaderera zvikuru.” Nzvimbo yacho yakatengwa muna December 1988, uye pave paya nzvimbo nhatu dzainge dzakabatana nayo dzakazotengwawo. Tikabatanidza kukura kwakaita nzvimbo yakavakirwa bazi neyakavakirwa Imba yeMagungano tinowana maeka 22.
Hama nehanzvadzi dzakawanda dzemunyika yacho uye dzekune dzimwe nyika dzakazvipira kuti dzibatsire pakuvaka bazi idzva neImba yeMagungano. Zvivako zvacho zvakatsaurirwa muna November 1996 pakauya nhengo dzeDare Rinodzora dzaiti, Carey Barber, Theodore Jaracz, naGerrit Lösch dzikabatanidzwawo pane zvaiitwa pakutsaurira kwacho. Mangwana acho pane misangano yakaitirwa mune dzimwe nhandare mbiri hombe munyika yacho, uye vashanyi vanopfuura 10 000 vakaenda kunoona zvivako zvitsva zvebazi.
Nhoroondo yevanhu vaJehovha muDominican Republic inenge isina kukwana kana tikasataura nezveZvapupu zvakawanda zvakatamira munyika yacho kuti zvinoshumira kwaidiwa vaparidzi vakawanda. Vakurudzirwa nemishumo yekuorera kwainge kwakaita ndima yacho zvekuti munhu aigona kuitisa zvidzidzo zveBhaibheri zvakawanda, vazhinji vakatanga kutamira munyika yacho makore ekuma1980 ava kunopera, sekunge kuti “vaiyambukira kuMakedhoniya.” (Mabasa 16:9) Hama nehanzvadzi idzi dzaiudza vamwe nezvekunakidzwa kwadzaiitwa mubasa rekukohwa muDominican Republic. Izvi zvakaita kuti vanhu vakawanda vatamire munyika yacho kuma1990.
Semuenzaniso, Stevan naMiriam Norager vanobva kuDenmark vashumira muDominican Republic kubva muna 2001. Asati aroorwa naStevan, Miriam ainge amboshumira munyika macho kwegore nehafu nasisi vake. Chii chakaita kuti Stevan naMiriam vatamire kunyika iri kure uye ine tsika nemutauro zvakasiyana nezvavo? Miriam anoti, “Tiri vaviri tinobva mumhuri dzakasimba mune zvekunamata. Vabereki vedu vakambova mapiyona chaiwo vachiri vaduku, uye vakazoita mapiyona enguva dzose pashure pekunge vava nevana. Vabereki vedu vaigara vachitikurudzira kuti tiitire Jehovha zvese zvatinogona mubasa renguva yakazara.”
Stevan naMiriam vari kushumira semapiyona chaiwo kubva muna 2006 uye vabatsira vanhu vakawanda kuti vadzidze chokwadi. Stevan anoti, “Makomborero acho akawandisa. Chero matambudziko atingatarisana nawo, hapana zviripo kana tichienzanisa nezvinhu zvakanaka zvatakasangana nazvo muushumiri uye mufaro unobva pakubatsira vanhu kuti vazive uye vade Jehovha. Takawanawo mhuri yakakura ine shamwari dzine rudo. Kushumira muDominican Republic kwatidzidzisa kuzvininipisa nekuva nemwoyo murefu, uye kurarama upenyu husina twakawanda-wanda kwasimbisa kutenda kwedu uye kuvimba kwatinoita naJehovha.”
Jennifer Joy ashumira kwemakore anopfuura 20 muDominican Republic, achibatsira mundima yemutauro wemasaini
Jennifer Joy ndemumwe wehanzvadzi dzakawanda dzisati dzaroorwa dzinobva kune dzimwe nyika, dziri kushumira muDominican Republic. Jennifer paakauya muna 1992 achishanyira maiguru vake, Edith White, avo vava nemakore vachishanda semumishinari, akanakidzwa nezvaiitika muushumiri. Akasanganawo nehanzvadzi dzakabva kune dzimwe nyika dzaishumira kunodiwa vaparidzi vakawanda. Jennifer anoti, “Ndainyara uye ndainge ndisina chivimbo zvakanyanya. Asi ndakafunga kuti, ‘Kana vachikwanisa kuzviita, pamwe ndinozvigonawo.’”
Pakutanga, Jennifer akaronga kungogara kwegore rimwe chete, asi gore negore ari kuramba ariko, uye ava nemakore anopfuura 20 achishumira ari muDominican Republic. Akabatsira vakawanda vaaidzidza navo Bhaibheri kuti vave vanamati vaJehovha. Jennifer akabatsirawo pakutanga kuparidza mundima yemutauro wemasaini munyika yacho uye kubatsira pakugadzira kosi yechikoro chemutauro wacho.
‘Jehovha ari kundichengeta kusvika pari zvino, saka ndingatadza nei kuva nechivimbo chekuti achandichengeta gore rinouya?’
Jennifer anozviriritira sei? Anoti: “Gore rega rega ndinodzokera kuCanada kunoshanda kwemwedzi mishoma. Mumakore ese aya ndaiita mabasa akasiyana-siyana, akadai sekuprinda mapikicha, kutora mapikicha, kupenda dzimba, kuchenesa mahofisi, kugadzira maraiti emotokari, uye kugadzira makapeti. Ndakaitawo mabasa akadai sekuratidza vanhu nzvimbo, kubatsira vanhu vanenge vachida kushanya, kudzidzisa Chirungu, uye kuturikira.” Jennifer anofananidza upenyu hwake nehwevaIsraeri pavaiva murenje. Anoti, “Vakararama nemashoko ose emumuromo maJehovha. Mwari akataura kuti aizovachengeta, uye ndozvaakaita. Vaiwana chikafu mazuva ese, uye hembe dzavo neshangu dzavo hazvina kusakara. (Dheut. 8:3, 4) Jehovha anovimbisa kuti achatichengetawo. (Mat. 6:33) Andichengeta kusvika pari zvino, saka ndingatadza nei kuva nechivimbo chekuti achandichengeta gore rinouya?”
Vaevhangeri vanozvipira vanosvika 1 000 vakauya vachibva kunyika dzakadai seAustria, Japan, Poland, Puerto Rico, Russia, Spain, Sweden, Taiwan, uye United States. Vaparidzi vanobva kunyika 30 avo vanoshumira mundima dzinodiwa vaparidzi vakawanda vava muungano dzemitauro yakadai seAmerican Sign Language (ASL), Chinese, English, Haitian Creole, Italian, Russian, uye Spanish. Sezvakataurwa nemuapostora Petro, vakati: “Tarirai! Isu takasiya zvinhu zvose uye tave tichikuteverai.”—Mako 10:28.
Kukohwa Kukuru.—Mat. 9:37
Vanhu vanozvipira vanenge 1 000 vanobva kunyika 30 vakabvuma kubatsira mapoka emitauro yakasiyana-siyana muDominican Republic. Unogonawo here kushumira mune imwe yendima dzemitauro iyi?